I-FAQs -Jinan JCUT CNC Izixhobo zeNC, Ltd.
Eli lixesha lokuqala ukuba ndithenge umatshini, ngaba kulula ukusebenza?
Sinokubonelela ngencwadi yokusebenza okanye ividiyo isikhokelo. Ukuba kunzima kuwe ukuba ufunde, sinokukunceda "ngokuba ujonge iqela" kwi-intanethi, ngomnxeba okanye uchaze iSkype.
Ungawukhetha njani umatshini ofanelekileyo?
Ungasitshela isixhobo esisebenzayo, ubungakanani, kunye nesicelo somsebenzi womatshini. Singacebisa oomatshini abafanelekileyo ngokwamava ethu.
Ndingayithemba njani inkampani yakho kunye neemveliso zakho?
Yonke inkqubo yokuvelisa iya kuba phantsi kokuhlolwa rhoqo kunye nolawulo olungqongqo lomgangatho. Umatshini ogqityiweyo uya kuvavanywa ukuqinisekisa ukuba banokusebenza kakuhle ngaphambi kokuba baphume kumzi-mveliso. Ividiyo yokuvavanya kunye nemifanekiso iya kubakho phambi kokuziswa.
Ukuba kukho umatshini onengxaki emva kokuyalela, ndingenza ntoni?
Amalungu asimahla athumela kuwe ngewaranti yomatshini ukuba umatshini unengxaki. Ubomi benkonzo yasimahla emva kwentengiso yomatshini, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi ukuba umatshini wakho unengxaki. Siza kukunika iiyure ezingama-24 ngefowuni kunye ne-skype.
Ewe! Samkela kakhulu abathengi ukuba batyelele umzi-mveliso wethu!
Luthini usuku lwakho lokuhanjiswa?
Kumatshini oqhelekileyo, malunga neentsuku ezili-15 zokusebenza; Ngomatshini ohleliweyo, malunga ne-20 imini yokusebenza.
I-MOQ yethu ngumatshini wokuseta ongu-1. Singathumela umatshini kwizibuko lelizwe lakho ngqo, nceda usixelele igama lezibuko lakho. Kuya kubakho iimpahla zokuhambisa ezilungileyo kunye nexabiso loomatshini elithumela kuwe.